N'èzí Switchyard (Ndụnye), China N'èzí Switchyard (ndụ ala) Nsuputa, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Ngwa igwe na igwe eletrik zuru oke>Mgbanwe Ebe Mpụga (Ndụ ọdụ)
Ebe ebe mgba ọkụ nke ọdụ ụgbọ elu na-enweta ma kesaa ike eletrik sitere na igwe na-emepụta hydro-generator, na ngwaọrụ nkesa ọkụ eletrik dị elu na-enye ike na grid ma ọ bụ ebe ibu mgbe ọ gbatịchara. Ihe mejupụtara ya bụ transformer, switchgear, mgba ọkụ na-ekewapụ onwe ya, inductor ibe, ọkụ ọkụ, ngwaọrụ bọs na ihe owuwu ụlọ metụtara ya. A na-ebufe ya n'ebe dị anya site na ebe mgba ọkụ.
Enwere ike kewaa ya n'ime ụzọ abụọ: ngwaọrụ nkesa ike n'èzí na nke ime ụlọ dịka ntinye nke ngwa eletriki si dị. A na-ahazi ngwa eletriki 110kV na 220kV na osisi ahụ mgbe ejikọtara ya na njirimara nke nhazi nke ọdụ ụgbọ mmiri, na ebe dị iche iche dị iche iche dị ntakịrị karịa nhazi n'èzí, ya mere mpaghara ahụ dịkwa ntakịrị. Ọnụ ego ihe owuwu obodo dị elu karịa nhazi n'èzí, na oge ihe owuwu ahụ dị ogologo, ma ọ dịghị emetụta ihu igwe ọjọọ. Mgbe ụfọdụ iji belata ụgwọ ọrụ ihe owuwu, a na-etinye akụkụ nke akụrụngwa n'èzí ụlọ ọrụ ahụ.
Okwu mmeghe nkenke maka nhazi nke ọdụ mgba ọkụ:
1. Igwe ọkụ eletrik dị elu: Ọ nwere ike ibipụ ma jikọta ihe na-adịghị na-ebu na ibu nke eriri na ngwa eletrik dị iche iche mgbe usoro ahụ na-arụ ọrụ nke ọma; Iji gbochie ịgbasa oghere nke ihe mberede ahụ, ọ nwere ike ịkwado nkwa mgbapụta ahụ iji kpochapụ mmebi nke ugbu a ngwa ngwa mgbe usoro ahụ dara;
2. Igwe ọkụ dịpụrụ adịpụ nke dị elu: Iji hụ na nchekwa nke ngwa eletriki eletrik dị elu na ngwaọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche n'etiti sekit n'oge ọrụ mmezi, mgbanaka dịpụrụ adịpụ nwere ike imeghe ma mechie sekit enweghị ibu, ma ọ bụghị. nwee ọrụ mkpochapụ arc;
3. Transformer ugbu a: Na-atụgharị elu ugbu a n'ime ala dị ugbu a nha nha. Akụkụ bụ isi nke ihe ngbanwe dị ugbu a na-ejikọta ya na usoro nke mbụ, na akụkụ nke abụọ jikọtara ya na ngwá ọrụ nha, nchebe relay, wdg;
4. Voltage Transformer: Maka nzube nke nchebe, metering, na ngwá ọrụ, ọ na-agbanwe elu voltaji n'ime ọkọlọtọ nke abụọ voltaji nke 100V ma ọ bụ ala dị ka a nhata mmekọrịta;
5. Lightning Arrester: Nke a na-eji echebe ngwa eletrik dị iche iche dị na sistemụ ọkụ site na mmebi nke oke ọkụ ọkụ na-ebute, oke ọkụ na-arụ ọrụ, na ike ugboro ugboro na-agafe agafe. A na-ejikọtakarị onye na-ejide ya n'etiti waya dị ndụ na ala, nke jikọtara ya na ihe eji echekwa ya.